Dubbii Abiyyi Ahime!!Bilxiginnaa Amaaraa Juntaa 2ffaa Abiyyitti taatee jirti?? – Kichuu
HomeNewsAfricaDubbii Abiyyi Ahime!!Bilxiginnaa Amaaraa Juntaa 2ffaa Abiyyitti taatee jirti??
Dubbii Abiyyi Ahime!!Bilxiginnaa Amaaraa Juntaa 2ffaa Abiyyitti taatee jirti??
Dubbii Abiyyi Ahimed Alii!! Bilxiginnaa Amaaraa Juntaa 2ffaa Abiyyitti taatee jirti??
Akka madda keenya irraa Odeeffannoo argannetti Abiyyi Ahimed Alii nagaa qaba! ajandaa Abiyyi ajjeefame jadhu qaamuma Mootummaatu bocee social Media irratti facaase.
‐ Akka maddi keenya jadhutti ajandaa kun wanti ba’ee kaayyoo gurguddaa of keessa qaba!
Bilxiginnaa Amaaraafi Bilxiginnaan Oromiyaa wal dhabdeen isaanii gara hin taanetti cee’uun hanga fonqolcha wal irratti yaaluutti kokkee wal qabanii jiru! Bilxiginnaan Amaaraa rukutuuf jacha Odeeffannoo Abiyyi du’e jadhu facaasanii Ummaatni Oromoo nu bira dhaabbata moo hin dhaabbatu jachuun adda baafachuuf hojjatan.
‐ Akkasumas Filannoo as deemtu irratti Ummaatni Oromoo Xiiqiin akka Abiyyi filatu goona jachuuf dubbii kana uuman. Inni ijoon Hidhamtoota siyaasaa Oromoo akka Ummaatni keenya ajandaa biraan butamee dagatu godhuudha.
Bilxiginnaa Amaaraa Juntaa 2ffaa Abiyyitti taatee jirti. Guyyoota as deeman keessa Bilxiginnaa Amaaraafi Bilxiginnaan Oromiyaa wal rukutuun isaanii waan hafa hin qabne!!
‐ Abiyyi Juntaa sadiitu itti bahe Tigraay keessa lolli hin dhaabbanne! Sudaan Masrii waliin wal ta’uun Misaa’ela dhukaasa jirti. Bilxiginnaa Amaaraas juntaa itti taate jirti Abiyyi rakkina kana hundaatu hudhee qabee akka Miidiyaa irraa fagaatu godhe!
‐ Odeeffannoo biraas akkuma adda baafneen isiniif Maxxansinaa!! Odeeffannoo sobaa irraa of eegaa obsaan nu hordofaa!!
“Dr.Abiyyi yoo biyya hogganuu dadhabe akkuma kootti aangoo dabarsee laachuu qaba malee biyya jeequun sirrii miti” jechuun MM.Duraanii Haylamaaram Dassalany Dr.Abiyyi qeeqee jira.
አቶ አገኘሁ ተሻገር ከአማራ ክልል ለጦርነት ዘገባ ወደ ትግራይ የሄዱትን ለ30 የሚሆኑ ጋዘጠኞችን ከግል ክሰ አውጥቼ 330,000 ብር ሸልማለሁ ብሏል።ቆይ ሰውዬ የመንግስት ባለስልጣን ወይስ ባለሀብት ነው?